Ngaba izixhobo ze-backlink indexer zisasetyenziswa ngoku ngoku?
Ngaba usazibuza ukuba i-backlink tooler zifanelekile ukusetyenziswa ngoku, okanye akunjalo? Impendulo elula kukuba - ewe, ikhona. Kwaye kukho izizathu ezininzi zokuqinisekisa kwakhona ukuba-ukuqhuba uxwebhu oluchanekileyo kufuneka KUYENZEKA kuyo yonke i-website. Ubuncinane kuba ngokuqhelekileyo kulinganiselwe kwi-SE-White Hat ye-SEO, ngokwenene ababizi. Ngoko-ke, sijongane neenkonzo zengqungquthela ye-backlink zigcine ubungqina bokuqala ngo-2017, kwaye zilindelwe isabelo seengonyama seengcali ze-SEO ukugcina ukufaneleka kwazo kwixesha elizayo. Yingakho ngaphantsi ndiza kuba nembonakaliso emfutshane malunga neengcebiso ezintle ngokubhekiselele kwizentengiselwano zoshishino zendawo, ukukhutshwa kogcino, amanxibelelwano e-syndication kunye nomxholo othi "i-SEO engafanelekanga" ekhuthaza ukuba i-backlink indexer isebenze ngakumbi.
Ngaphambi kwayo nayiphi na enye into, ukucatshulwa kwamashishini akufutshane akufanele kuthatyathwa, ngokukodwa malunga neeprojekthi ezininzi ze-intanethi okanye izenzo ezincinci zezoshishino. Kungenxa yokuba kwanokuba igunya eliphezulu nelisemgangathweni ligunyazisileyo lingenakwenzeka ukungena kwi-Google kwisaziso esifutshane. Ngoba? Ingxaki kukuba isabelo seengonyama seenkcazelo ezinxulumene nomxholo sisoloko sisetyenziselwa ukuhanjiswa ngokuphindaphindiweyo. Kwaye kutheni ungayifumana inzuzo ngokufanelekileyo kumncintiswano osondeleyo kwaye uthathe ukhokelo? Ngako oko, izixhobo ze-backlink indexer zifanelekile ukusebenzisa ubuncinci kuba iwebhusayithi yakho idinga amanqaku amaninzi ekhompyutheni, ngaphandle kokuba ikhona enye engayiboniyo ngeenjini zophando.
Into leyo kukuba phantse zonke ikhonkco eziphumayo ukusuka kumaphephandaba ashicilelwe kuphela, okanye ngokwenene noindex. Ngoba? Kungenxa yokuba iinjongo ezinkulu zophando ezifana neGoogle ngokwayo ziyazi ukuba nabani na umntu onokuhlawula umzila wokukhutshwa kwee-press. Ngenxa yoko, unokufumana kalula i-backlinks kwikhulu lokushicilelwa kwiphephandaba kwi-media media okanye kwiwebhusayithi yeendaba. Nangona kunjalo, enye kuphela okanye ezimbini zazo ziyakuthi zikhethwe kwiluhlu lwe-Google lwe-SERP. Kwaye nasi isisombululo sakho - iziphumo eziqhelekileyo zale backlinks ezixotshiwe zingcono kakhulu xa zenziwa nge-backlink tooler zixhobo ezifana ne-Instant Links Indexer, kunye ne-Backlinks Indexer. Ndizame zombini, ngoko ke kuphela kuwe ukugqiba ukuba ngubani ozakukhetha.
Ngelishwa, kungathatha ixesha elininzi kwi-Google nakwezinye iinjongo zokusesha ukufumana nayiphi na i-backlinks eyadalwa ngokutsha kunye neenethiwekhi ezihamba phambili, ezifana neTumblr, Blogger, njl njl.Yingakho ndikholelwa ukuba iinkonzo ze-backlink indexer zisebenza kakuhle. Emva kwakho konke, inzuzo yokuthengisa ukufumana ukuba ezo zixhobo zikhokhelwe kufuneka zibe phakathi kwezinto zakho eziphezulu, okulungileyo?
Yimeko eqhelekileyo xa omnye umncintiswana efuna ukukrazula i-website epheleleyo. Ndiyathetha ukuba umntu angasebenzisa kalula imibhalo yakho ekhethekileyo ukuyipapasha njengomxholo wekhasi ekhompyutheni kwenye indawo enePRR, okanye igunya lesizinda. Ngaloo ndlela, kunokubonakala ngathi iwebhusayithi yakho yenza nje umxholo wephepha, kunokuba ube yinkampani eyonakalisiweyo. Yingakho ulungele ukuba onke amanqaku akho afakwe kwi-intanethi ngokukhawuleza kunokuba abo bafana abangenangqiqo abenza njengama-copycats nje ukuba babe inxalenye yomsebenzi wakho onzima. Ekugqibeleni, igalelo elichaphazelekayo kwi-"SEO engalunganga" kufuneka ibe yinto yokugqibela ngokuqinisekileyo ukuthetha kwakhona kwakhona - ukunyamekela ukuphatha isicwangciso esifanelekileyo semigudu ye-backlink indexer isIKHONA yonke iwebhusayithi Source .